बंगलादेशमा नेपाली विद्यार्थीहरू | Narendra Raule
बंगलादेशमा नेपाली विद्यार्थीहरू
Posted By: Narendra August 14, 2015
अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरूको छनौटमा प्राय:जसो युरोपेली मुलुक नै पर्छ । धेरै नेपाली विद्यार्थीले लाखौं खर्च गरेर विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्ने सपना पाल्छन् । तुलनात्मक रूपमा एसियाली मुलुकहरूमा पढ्न जानेहरूको त्यति चर्चा भएको पाइँदैन । नेपालबाट नजिकै रहेको बंगलादेशमा अहिले झन्डै ४ हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
बर्सेनि कम्तीमा ५ सय विद्यार्थी अध्ययनका लागि बंगलादेश पुग्छन् । नेपालस्थित बंगलादेशी राजदूतावासका हेड अफ चान्सिरी एमडी बारिकुल इस्लामका अनुसार गत वर्ष मात्र १ हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि बंगलादेश पुगे । मेडिकल अध्ययनका लागि नेपालीहरू चीन, फिलिपिन्स, भारत, पाकिस्तान र रूस जाने गरेका छन् । अहिले ती सबै देशभन्दा बंगलादेश जानेहरूको संख्या बढी छ । किनभने बंगलादेशको पढाइ अन्यत्रभन्दा सस्तो छ । शिक्षाको गुणस्तर पनि त्यहाँ अन्यत्रभन्दा राम्रै मानिन्छ । सहजै पुग्न सकिने र त्यहाँको रहनसहन नेपाली परिवेशअनुरूपकै भएकाले बंगलादेश नेपालीहरूको छनौटमा परेको हो ।
राकेश शाह पहिलो पटक सन् २००६ मा सार्क कोटाको छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढ्न बंगलादेश गएका थिए । अहिले बंगलादेशमा हरेक वर्ष १२ जना नेपालीले सार्क कोटाको छात्रवृत्ति पाउँछन् । यो छात्रवृत्ति मेडिकल विषयमा मात्र पाइन्छ । सिल्हेट एमएजी उस्मानी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेका राकेशले सन् २०१२ मा आफ्नो अध्ययन पूरा गरे । बंगलादेशमा सरकारी कलेजमा पढ्न पाउनु ठूलो कुरा हो । राकेश भन्छन्, ‘प्राइभेट कलेजमा कुनै न कुनै कुराको कमी हुन्छ ।’ बीएसएमएमयुमा एमएस (मास्टर्स इन् सर्जरी) मा अध्ययनरत डा. राकेशको अनुभवमा २–३ महिनासम्म कहाँ आए, किन आए भनेर पछुतो पनि हुन्छ ।
भाषा, खानपिन, पढाइको तरिका तथा रहनसहनको समस्या हुन्छ । पछि बानी पर्छ, गारो हुँदैन । नेपालीहरूबीच भेटघाट हुन्छ, कार्यक्रम, अन्तरक्रिया भैरहन्छ, रमाइलो हुन्छ । स्थानीय साउथ एसियन म्युजिक इन्सिट्च्युटले बेलाबेलामा कार्यक्रमहरू आयोजित गरिरहन्छ । त्यस्ता कार्यक्रममा नेपाली गीत–संगीत पनि बजाइन्छ, जसले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई ठूलो राहत दिन्छ ।
बंगलादेशका सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै बिरामीको औषधि–उपचार नि:शुल्क हुन्छ । पैसा लिए पनि कमै लिन्छन् । त्यहाँ २३ वटा सरकारी मेडिकल कलेज छन् । त्यहाँबाट उत्तीर्ण हुन पढ्नैपर्छ, नपढी सुखै छैन । अरूले सोचे जस्तो सजिलो भने छैन, लगभग दिनहँुजसो परीक्षा हुन्छ, क्लास टेस्ट भैरहन्छ । आज पढाएको पाठ सकेपछि, भोलिपल्ट परीक्षा हुन्छ । त्यसैले नियमित तयारी नगरी सुखै छैन ।
बंगलादेशमा शुक्रबार बिदा हुन्छ । विद्यार्थीहरू बिहीबार रमाउँछन् । किनभने त्यो दिन परीक्षा हुँदैन । ५ वर्षे मेडिकल कोर्समा १ वर्ष इन्टर्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यहाँको सरकारी विश्वविद्यालयमा ६ महिनाको ५ सय रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्छ । होस्टेल, कलेज, लाइब्रेरी, ल्याब सबै शुल्क यसैभित्र पर्छ तर प्राइभेट विश्वविद्यालयमा पैसा तिरेर पढ्ने हो भने ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ । पहिले छात्रवृत्तिको १२ सिटमा नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ वटा तथा बंगलादेशको दूतावासले ६ वटा सिट पठाउँथ्यो । अहिले १२ वटै सिट दूतावासले पठाउने गरेको छ ।
जनकपुरकी मनीषा कुमारीले ढाका विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व तथा शान्ति विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरिन् । बंगाली भाषा हिन्दी र नेपालीसँग मिल्ने भएकाले उनलाई भाषाको कठिनाइ भएन । संस्कृति पनि धेरैजसो मिल्छ । मुस्लिम देश भए पनि त्यहाँ हिन्दु र बौद्धहरू पनि ठूलो संख्यामा छन् । दसैं, तिहार, छठ, इद जस्ता चाडहरू त्यहाँ पनि मनाइन्छ । ‘समुद्रको किनारमा त्यसै रमाइलो हुन्छ ।’ मनीषा भन्छिन्, ‘त्यहाँको बिरयानी र चिकेन ग्रिल एकदमै मीठो लाग्छ ।’ बंगलादेशको पढाइप्रति उनी सन्तुष्ट छिन् ।
मनीषालाई बिजनेस स्टडिजभन्दा द्वन्द्व तथा शान्ति विषय राम्रो लाग्यो । पिस बिल्डिङ, पिस किपिङ, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू, ह्युम्यानिटेरियन ल आदिका सम्बन्धमा उनले विस्तृत ज्ञान पाइन् । उनलाई एनजीओमा जागिर खाने रहर छ । मनीषालाई आफूले पढेको विषयले त्यसमा सहयोग पुग्ला जस्तो लाग्छ । यो विषय पढिरहेका उनका साथीहरू सरकारी तहमा काम गर्न गैसकेका छन् ।
मनीषाले एकवर्षे कोर्सका लागि ७० हजार रुपैंयाँ खर्चिएकी थिइन् । ‘कोर्स सकिनचाहिँ डेढ वर्ष नै लाग्यो ।’ उनले भनिन्, ‘होस्टेल खर्च मासिक ५ सय टाका (६ सय नेपाली रुपैयाँ) तिर्नुपर्छ । मासिक २२ सय रुपैयाँ खाना खर्च लाग्छ । उनले जनकपुरको रारा बहुमुखी क्याम्पसबाट बीबीएस पूरा गरेपछि ढाकाको युनिभर्सिटी अफ एसिया प्यासिफिक, ढाकाबाट एमबिएको अध्ययन पूरा गरेकि थिईन् । पैसा तिरेरै अध्ययन गरेकी मनिषाले २ वर्षभन्दा बढी बंगलादेशको रेडियोमा काम गरिन् । त्यहाँ उनी हिन्दी भाषामा कार्यक्रम चलाउँथिन् । त्यसबापत प्रतिकार्यक्रम सुरुमा ३ सय र पछि ४ सय टाका पारिश्रमिक पाउँथिन् ।
बंगलादेशमा मेडिकलबाहेक इन्जिनियरिङ एवं आमसञ्चार तथा पत्रकारिताका लागी पनि राम्रो शैक्षिक वातावरण छ । यद्यपि आम विद्यार्थीहरूसम्म त्यससम्बन्धी सूचना पुग्न सकेको छैन । राजदूतावासले सिधै सूचना निकाल्दैन । अरु विषयका बारेमा त्यति जानकारी नभएपछि विद्यार्थीहरू जाने आधार नै बन्दैन ।
बंगलादेशको बंगलादेश युनिभर्सिटी अफ इन्जिनिरिङ एण्ड टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत इन्जियिनरिङका विद्यार्थी बिपिन गुप्ता पनि त्यहाँको बसाइप्रति सन्तुष्ट छन् । हावापानी नेपालको तराईसँग मिल्दोजुल्दो छ । संस्कृति तथा चाडबाड आदि पनि मिल्छन् । ‘नेपालमा बसे जस्तै हुन्छ ।’ बिपिन भन्छन्– बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो चाड इद हो । बंगलादेशमा मुस्लिमहरूको बाहुल्यता भए पनि हिन्दु, बौद्धहरू उल्लेख्य संख्यामा छन् ।
त्यहाँ नेपालीहरूले बंगलादेशी र बंगलादेशीहरूले नेपालीसँग घरजम गरेका छन् । दाल, भात, तरकारी तथा अचारका लागि बंगाली र नेपाली भाषामा एउटै शब्द प्रयोग हुन्छ । नेपालीहरू बंगलादेशमा आफ्नै खर्चमा पनि पढ्न सक्छन् । बंगलादेशको पढाइ नेपालको भन्दा सस्तो मानिन्छ । बंगलादेशमा किस्तामा पैसा तिर्न पाईने ब्यबस्था पनि छ । बंगलादेशमा कोठाको समस्या हुँदैन । प्राय: कलेजहरूले नै सस्तो होस्टलको व्यवस्था गरिदिन्छन् ।
पहिलोपटक बंगलादेश जाने जो कोहीलाई फ्री भिसा दिइन्छ । विद्यार्थीहरूको हकमा भने फरक नियम छ । १५ डलर तिरेपछि ६ महिनाका लागि भिसा दिइन्छ । हरेक वर्ष १५ डलर तिरेर भिसा रिन्यु गराउनुपर्छ । ५ वर्षको फी एकैपटक तिरेर पनि भिसा लिन सकिन्छ । सन् २०१३ मा बंगलादेशले नेपालीहरूलाई भिसा रिन्यु गरेको १ सय डलर लिएको थियो । विश्वव्यापी नेपाली विद्यार्थी संगठन, (डब्लूएनएसो) बंगलादेशले त्यसको बिरोध गर्‍यो । त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर नेपालस्थित राजदूतावासमा बुझाएपछि भिसा शुल्क फेरि १५ डलर नै बनाइयो ।
बंगलादेशमा नेपाली संघसंस्था
बंगलादेशमा विश्वव्यापी नेपाली विद्यार्थी संगठन (डब्लूएनएसो) सक्रिय छ । हरेक वर्ष नेपाली विद्यार्थीहरू भेला भएर डिजे पार्टी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फुटबल प्रतियोगिता आदि आयोजित गरिन्छ । समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई सुझाव, सल्लाह, सहयोग गर्नुका
साथै छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा जानकारी गराउने, त्यसको प्रक्रियामा सहयोग गर्ने काम पनि संगठनले नै गर्छ । नेपाल स्कलरसिप फाउन्डेसनले पनि यो विषयमा सूचना प्रदान गर्दै आएको छ ।
सही सूचनाको अभाबमा बर्सेनि नेपाली विद्यार्थीहरू एजेन्ट र कन्सल्ट्यान्सीबाट ठगिएका छन् । यहाँ एउटा कलेज भनेर लिने उता गएपछि अर्कै कलेजमा भर्ना गरिदिने घटनाहरू दोहोरिएका छन् । ढाका भनेर लग्ने उता पुगेपछि अन्यत्रका कलेजमा भर्ना गरिदिने पाइएको छ । विश्वब्यापि नेपाली विद्यार्थी संगठन (डब्लूएनएसो) का अध्यक्ष यादब भट्टराई भन्छन्– सही सूचना लिएर बंगलादेश जानु राम्रो हुन्छ । नेपालबाट हवाईमार्ग हुँदै सीधै बंगलादेश पुग्न सकिन्छ । लगभग ३० हजार रुपैयाँमा आउन जान सकिन्छ । सडकमार्गबाट पनि बंगलादेश जान सकिन्छ । काँकडभिट्टाबाट सिलीगुढी हुँदै बंगलादेश पुग्न सकिन्छ । सडक मार्गबाट बढीमा ५ हजार रुपैयाँ लाग्छ ।
बंगलादेशमा घुम्नलायक ठाउँहरू
संसारकै सबैभन्दा लामो समुद्री किनार कक्स बजार बंगलादेशमै छ । भारतका सिलेट पहाड, सिलोङ, चेरापुञ्जी पनि बंगलादेशबाट नजिकै छ । त्यहाँको सुन्दरवन डेल्टा पाटेबाघका लागि विश्वप्रसिद्ध छ । सोही ठाउँका कारण पाटेबाघलाई अंग्रेजीमा रोयल बंगाल टाइगर भनिएको हो ।
गत २ वर्षमा कति नेपाली विद्यार्थी बंगलादेश पुगे ?
सरकारी मेडिकल कलेज २१
प्राइभेट मेडिकल कलेज १७४
अन्य विषयमा ५४
सरकारी मेडिकल कलेज २३
प्राइभेट मेडिकल कलेज ३३५
अन्य विषयमा ८४
Be the first to comment on "बंगलादेशमा नेपाली विद्यार्थीहरू"